Apple ayaa joojisay saxiixa macruufka 14.8 | Wararka IPhone
Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 14.8
Sida caadiga ah, Apple wuxuu raacayaa borotokoolka si uu u joojiyo saxiixa noocyadii hore ee macruufka iyo dhowr saacadood, shirkadda fadhigeedu yahay Cupertino Waxaan joojiyay saxiixa macruufka 14.8 taas oo ka dhigaysa mid aan suurtogal ahayn in adeegsadayaasha u dallacsiiyay macruufka 15 inay dib ugu noqdaan macruufka 14.
Waxay umuuqataa in Apple waxaad meesha ka saareysaa saxiixa macruufka 14.8 ee aaladahaaga. In kasta oo aysan suurtagal ahayn in hoos loo dhigo macruufka 14.8 ee iPhone X, iPhone XR, iyo iPad Air 3, haddana waxaa suurtogal ah in hoos loo dhigo aaladaha kale ee cusub, in kasta oo laga yaabo inay taasi is beddesho waqtiga daabacaadan.
In Apple ay joojisay saxiixa macruufka 14.8 micnaheedu maaha inaad ilowday aaladahaanTan iyo haddii la arko cilad weyn oo xagga amniga ah, adeegsadayaasha aan cusbooneysiinin qalabkooda (sannadkan Apple waxay beddeshay xeerarkeeda oo cusboonaysiinta waa ikhtiyaar) waxay sii wadi doontaa inay hesho cusboonaysiinta amniga.
Cusboonaysiintii ugu dambeysay ee Apple laga sii daayay iOS 14 wuxuu ahaa nooca 14.8, oo ah noocaas saxay nuglaanta maalinta eber ee muhiimka ah taasi waxay dhaaftay nidaamka amniga ee BlastDoor ee Apple.
BlastDoor waa nidaam amni oo lagu bilaabay macruufka 14, hab sanduuq ciid ah oo ka ilaaliya barnaamijka Fariimaha iOS inteeda kale. In kasta oo dhammaan barnaamijyada macruufka horeba loogu xardhay sanduuq, BlastDoor wuxuu ku darayaa lakab dheeri ah oo ilaalin ah barnaamijyada Farriimaha Apple.
App -ka Farriimaha ee Apple ayaa horay loo adeegsan jiray fuliyaan weeraro badan Sababtoo ah sida laga soo xigtay cilmi -baarayaasha amniga, dalabka si sax ah uma kala soocin xogta isticmaale ee soo socota, taasoo u oggolaaneysa haakarisku inay gacanta ku dhigaan iPhone kaliya iyagoo u diraya qoraal ama farriin sawir ah aaladda.
Wadada buuxda ee maqaalka: Wararka IPhone » macruufka » macruufka 14 » Apple wuxuu joojinayaa saxiixa iOS 14.8
Waxaan haystaa iphone5 waxaanan u malaynayaa in gabowgu iima oggolaan doono inaan galo arjigayga gelitaanka waxaanan rabaa inaan ku sii wato iphone5 iyo weliba in codsiga gelitaanku shaqeeyo, sida loo sameeyo?
Ka jawaab Anselmo valencia Santiveri
Hadda waa suurtogal in loo soo gudbiyo Apple codsiyada App Store
Apple waxay heshiis la saxiixatay Premier League si ay uga muuqato "Ted Lasso"